भारतबाट फर्किएकाहरुलाई जबर्जस्ती कोचिएको थियो टिपरमा – Yug Aahwan Daily
भारतबाट फर्किएकाहरुलाई जबर्जस्ती कोचिएको थियो टिपरमा
युग संवाददाता । २९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ११:०५ मा प्रकाशित
576 पटक हेरिएको
सुर्खेत, २९ जेष्ठ ।
कालिकोटमा बुधवार टिपर दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएका छ । मृत्यु हुनेमा रास्कोट नगरपालिका वडा नम्बर २ का सर्मिला सार्की र थम्की सार्की छन् । उनीहरुको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । त्यस्तै दुर्घघटनामा मन्ना सार्की कुमाल र तीन वर्षिया बालिका सरिता सार्की वेपत्ता भएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवत्ता प्रहरी उपरीक्षक राजिव बस्नेतका अनुसार वेपत्ताहरुको खोजी कार्य जारी छ । घटनापछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र स्थानीयले दिनभर खोजीकार्य जारी राखेको भए पनि नदी धमिलो भएका कारण खोजीमा समस्या भएको प्रहरीको भनाइ छ । यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटले भने चालकको गल्तीमा कारण दुर्घटना भएको जनाएको छ । चालकले गुडिरहेको टिपर छाडेर भाग्दा दुर्घटना भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
तस्विर : बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले टिप्परमा नागरिक वसार पसार गर्दै
‘ड्राइभरले चापी गाडीमै छोडेर ओर्लिएछन्’ कालिकोटमा प्रहरी प्रमुख डिएसपी श्यामबहादुर ओलियाले भने, ‘प्रारम्भीक अध्ययनअनुसार ड्राइभर गाडीबाट झरेकै कारण दुर्घटना भएको देखिन्छ ।’ यात्रुसँगको सामान्य विवादपछि टिपर रोकेर यात्रु झर्दै गर्दा ड्राइभर पनि झरेका कारण दुर्घटना भएको प्रहरीको निस्कर्ष छ ।
रास्कोट नगरपालिका वडा नं. ८ का टिपर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । दुर्घटनामा मृत्यु भएका तथा बेपत्ता भएकासहित ३९ जना भारतबाट आएका थिए । उनीहरू सबै रास्कोट नगरपालिकाकै हुन् । सीमावर्ती क्षेत्रबाट उनीहरूलाई मंगलबार राती कालिकोट पु¥याइएको थियो । रास्कोट नगरपालिकाका मेयर काशीचन्द्र बरालका अनुसार उनीहरूमध्ये केही मंगलबार राती पुगेका थिए भने केही बुधबार बिहान कालिकोट पुगेका थिए । क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि नगरपालिकातर्फ लैजाँदै गर्दा टिपर दुर्घटनामा परेको हो ।
दुर्घटनामा परेको टिपर नगरपालिकाले आफैले खरिद गरेर ल्याएको थियो । भारतबाट आएका ३९ जना नागरिकलाई लिएर रास्कोटतर्फ गइरहेको ना ८ ख ५१३३ नम्बरको टिपर लालिघाट नजिकै कर्णाली नदीमा खसेको थियो । घटनापछि कर्णाली प्रदेश सरकारले शोक बक्तव्य जारी गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही बुधवार नै कालिकोट पुगेका थिए ।
घाइतेलाई काठमाडौं लगियो
दुर्घटनाका घाइतेलाई नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्दार गरिएको छ । गम्भीर घाइते भएका रास्कोट नगरपालिका वडा नं. २ का निस्पता सार्की र सोही ठाउँका मिन सार्कीलाई उद्दार गरी काठमाडौं पु¥याइएको हो । निस्पताको दाइने खुट्टा छिनिएको छ भने बाँयाँ कोखामा छेद परेको छ ।
घाइते सोही वडाका प्रजे सार्की, अनिता सार्की, विवेक सार्की, असोक परियार, गोविन्द सार्की र तीन महिने बालकको जिल्ला अस्पताल कालिकोटमा उपचार भइरहेको छ । घटनामा बाँकी २५ जना भने सामान्य घाइते छन् । उद्दारका लागि कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट कालिकोट पुगेका थिए ।
भारतबाट आएकाहरुलाई टिपरमा कोचेर लैजान खोजेपछि विवाद भएको थियो । टिपरका चालक र स्थानीय प्रहरीले नगरपालिकाले सबैलाई एकैपटक ल्याउनु भनेको बताउँदै सबैलाई चढाए । सोहीक्रममा कोचाकोच नजाने भन्दै केही यात्रुले नजाने बताए । त्यहीक्रममा केहीले टिपरबाट हाम फाले । त्यसपछि चालक र भारतबाट आएकाहरुबीच विवाद भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
विवाद भएपछि रिसको झोकमा चालकले गुड्दै गरेको टिपर छाडेर भागेको प्रत्यक्षदर्शी मानबहादुर बमले बताए । उनकाअनुसार चालकले छाडेपछि टिपर गुड्दै नदीमा खसेको थियो । त्यसक्रममा सक्नेले हाम फालेर ज्यान जोगाए पनि महिला र बालबालिका टिपरसँगै नदीमा खसेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै दुर्घटनाबारे सुनाउँदै गोविन्द सार्कीले भने,‘तीन चारजना गर्भवती दिदीबहिनीहरु हुनुहुन्थ्यो, केटाहरु पहिले नै झल्यौँ । महिलाहरु झर्दै थिए, टिपर एक्कासी कर्णालीमा खस्यो ।’ उनले आफूहरुले टिपरमा कोचिएर नजाने बताउँदा पनि जबर्जस्ती राख्दा दुर्घटना भएको बताए । ड्राइभरले जिद्दीले दुर्घटना भएको उनको भनाइ छ ।